Mampiaraka sy ny fifandraisana torohevitra - Afaka mampiasa ny Lalàna ny Tia ny Hahitanao ny Tena Fitiavana?
amin'ny Ary Baritchi
Mampiaraka sy ny fifandraisana torohevitra – Lalàn'ny Tia
Last nohavaozina: Dec. 27 2017 | 3 min namaky
Ka inona no Lalàna ny Tia? Raha tsorina izany dia Rehetra Izao lalàna izay milaza fa dia hisarika eo amin'ny fiainantsika ny zavatra fa hampifantoka ny saina amin'ny, na dia tsara na ratsy. Na dia mahatsapa izany na tsy, ny hevitra rehetra ianareo, ny fihetseham-po rehetra ianao, izay rehetra mandre sy mamaky ianao, vokany eo ny zava-misy.
Ka inona no ifandraisan'izany amin'ny hoe mampiaraka sy ny fifandraisana?
Ny tena mahafantatra izay tianao avy amin'ny fifandraisana sy ny fampiharana ny lalàna fototra tena ny sasany ny Tia fitsipika, dia ho azo antoka fa mahazo izay tena maniry. Zava-dehibe ny mahatakatra tsara izay toetra ara-batana, fitondran-tena, soatoavina, zavatra inoana, sy ny zavatra mahaliana dia zava-dehibe aminao mba hahafahanao hifantoka amin'ny izay tianao eo amin'ny fifandraisanareo, fa tsy izay tsy te.
Tsarovy, dia hahazo izay hifantoka amin'ny.
Matetika, ny olona iray dia tsy handeha amin'ny fifandraisana amin'ny hafa tsy manome na inona na inona, raha mieritreritra ny antony na fomba tsy mahomby foana ny fifandraisana. Tsaratsara kokoa, Rehefa nandeha ny marina izy ireo ary hifarana any fifandraisana hafa izay tsy mahomby tahaka izany, nefa mifanohitra tafahoatra antony.
“Raha toa ka ianao toy ny aho, ianao tsy hoe ny zavatra tena tianao
avy amin'ny fifandraisana manaraka N ihany dia tokony ho samy hafa tanteraka amin'ny
ny farany izay tsy toy izany miserably!”
Azo antoka fa fantatr'ireo izay aho tsy te N, fara fahakeliny, avy any amin'ny fifandraisana izay vao tapitra. Tsy izany efa lehibe aho, raha efa naka ny fotoana hieritreretana ny rehetra ny tsy mitambatra ny fifandraisana sy ny ratram-po rehetra ho iray mazava tsara hoe inona no nataoko ary tsy te amin'ny fifandraisana? Azoko natao ny namonjy ny tenako nitaredretra i vitsivitsy ny pendulum.
Ahoana no 'Hamoraina’ fifandraisana tonga lafatra ho ahy?
Handeha aho haneho anao ny tena fomba haingana sy tsotra mba hisarihana ny tena iray izay mitady – Ny nofy daty!
Haka taratasy iray ary soraty ny zavatra rehetra tianao eo amin'ny fifandraisana tanteraka. Inona no izy tahaka? Ahoana no dia mijery, manimbolo, lahateny? Inona no karazan-javatra no hataonao miara-? Inona no tsapanao rehefa manodidina azy ireo ianao? Tena tonga any izany ary manokana fotoana mba hanoratra ny tsipiriany rehetra. Dia Ho very maina izany amin'ny farany.
Ny ankamaroan'ny olona na oviana na oviana izany no tena ilaina ny nanoratra teo izay tiany, nefa izany no zava-dehibe indrindra tokana eo amin'ny fitadiavana ny mpiara-miasa ny nofinofiny.
“Fantatrao ve fa amin'ny alalan'ny fanoratana teo fotsiny izay tianao, ianao hampitombo ny vintana hahazo izany amin'ny alalan'ny 80%!”
Eritrereto fotsiny anie izany ho iray minitra…
Aza misalasala ny tenanao. Eritrereto hoe tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra ary tsy misy na inona na inona eo amin'ny fomba hahazo tsara izay tianao. Tsy ny vola, na ny tarehiny, na ny fotoana, na ny zavatra hafa.
“ImagineÖ Afaka manana na inona na inona izay tianao!”
Rehefa vita tamin'ilay soso-, dia ho tsara mialoha ny lalao. Raiso raha mbola ilainao… Izany no fanalahidin 'ny fahombiazana farany!
Tena mazava ao an-tsainao ny zavatra tianao. Raha tsy izany, izao rehetra izao dia tsy hoe ny zavatra tena tianao N ary izany no izany dia hanome anao. (Haingana fotsiny fanamarihana, rehefa hoe 'Universe', I hoe Andriamanitra, Buddha, Neny tany, na na inona na inona teny ampiasainao ho an'ny rehetra ny hery ambony kokoa.)
Sahiran-tsaina? Tomoera eto amiko hereÖ Eritrereto hoe handeha hisakafo any amin'ny hotely, ary nandidy ny hamburger. Ny mpandroso sakafo mba mitodika amin'ny. Eo anoloan'ny hamburger tonga, anao hanova ny mba. Ankehitriny milaza ny mpandroso sakafo izay tena tianao ny steak. Ny mpandroso sakafo mba mitodika amin'ny. Eo anoloan'ny steak tonga, milaza ny mpandroso sakafo ianao fa efa niova indray ny sainao ary te ho salady. Amin'izao fotoana izao, waiters indrindra Hilaza aminao mba hanao ny salady ny tenanao. Izao Rehetra Izao tsy hanao izany, fa afaka ny hahita ny fomba tena sarotra izany ho an'ny Rehetra Izao mba hanome anareo tsara izay tianao rehefa tsy dia mahalala?
OK N vita?
Raha tsy manao izany N hiverina ary manao izany. Nilaza aho fa izay no tsotra, nefa mbola tsy maintsy manao kely ny asa.
Ankehitriny kosa ianao no tena mazava ny zavatra tena maniry eo amin'ny mpiara-miasa, iny ampaha-taratasy, hamoritra azy ka ento miaraka aminao, fara fahakeliny isan-kerinandro. Ento ao am-paosinao, ao amin'ny kitapom-batsy, na kitapom-bola, na ao amin'ny atin'akanjo. Tsy mampaninona izay mametraka azy, raha mbola mitandrina izany eo aminareo, fara fahakeliny isan-kerinandro. Isaky ny mahatsiaro fa manana izany taratasy miaraka aminao, tsarovy ny fahatsapana izay dia ho tahaka ny miaraka amin'ny mpiara-miasa. Tena mahatsapa izany!
Misy zavatra hafa dingana manan-danja. Nandritra amin'ity herinandro ity, ho azo antoka fa hihaino ny gut, na anaty feo. Raha milaza ianao mba hijanona amin'ny lamba maina ny talata rehefa mandeha ara-dalàna ny alakamisy, handeha tamin'ny Talata! Mety hifanena aminareo ny fanahy vadinao raha mbola nijoro teo amin'ny tsipika. Ny hevitra eto dia ny hoe ianao nametraka ny filaminana amin'ny Izao Rehetra Izao, izao ianao no mila mandinika ny famantarana izay nalefa ny lalanao sy ny Asa ON AZY IREO!